१४ वटा हिमाल चढी किर्तिमान राख्ने जापानी आरोही हिरोताका भन्छन्- नेपाल पृथ्वीको स्वर्गजस्तो छ – Clickmandu
१४ वटा हिमाल चढी किर्तिमान राख्ने जापानी आरोही हिरोताका भन्छन्- नेपाल पृथ्वीको स्वर्गजस्तो छ
एकराज पाठक/रमेश लम्साल/रासस २०७६ पुष २ गते ११:१३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । ‘पाकिस्तानको गासेरब्रुम हिमाल चढ्दा दुर्घटनामा परें, मेरुदण्डको हड्डी भाँच्चियो, सँगैका केही साथी पनि त्यसैमा परेर मरे । मलाई पनि बचुँलाजस्तो लागेन । भ्रमण दलका एकजना आरोही चिकित्सक रहेछन् । उनले तिमी भोलिसम्म मर्छौ, तिम्रो घर परिवारलाई केही सन्देश छ भने भन, म परिवारलाई पुर्याइदिउँला ।’
आरोही ताकेउचीले आफ्नो संघर्षले भरिएको जीवनगाथा सुनाए । ८ हजार मिटरमाथिका विश्वका १४ वटै हिमाल चढेका उनी पहिलो जापानी हुन् । उनले त्यहाँ आफ्नो अनुभव सुनाउँदा कुनै बेला उनको मुहार चम्किन्थ्यो र उत्साहित देखिन्थे ।
अनि बेला बेलामा उनको मुहारमा दुःखको विराट तस्बिर झल्किन्थ्यो तर, उनको अभिव्यक्तिमा अदम्य साहस देखिन्थ्यो र यसबाट बुझ्न सकिन्थ्यो– उनी थाकेका छैनन्, अझै धेरै गर्न बाँकी छ ।
सामान्य मानिसलाई त सानातिना पहाड चढ्नु पनि कल्पना बाहिरको कुरा हो । अझ ८ हजार मिटरभन्दा अग्लो हिमाल चढ्नु झन सानो कुरा भएन । नेपाल हिमालै हिमालको देश हो, तर पनि एकाध सय नेपाली मात्रै हिमालको टाकुरामा पुगेका होलान् । अनि सगरमाथा चढ्ने नागरिक त धेरै कम । त्यसमा अझै ८ हजार मिटरमाथिका १४ वटै हिमाल चढ्ने त कति हो कति कम ।
पातलो ज्यानका हिरोताका आफूले पाएको दुःख र पीडाको मात्रै नभई रोमाञ्चक अनुभव सुनाउन उभिएका थिए । शुरुमै उनले भने, ‘तपाईंहरुले विश्वका ८ हजार मिटर अग्ला १४ वटै हिमाल चढेको मान्छे देख्नुभएको छ ? छैन भने आजै देख्दै हुनुहुन्छ, त्यो म नै हुँ । अचम्म नमान्नुहोला यस्तो मानिसले कसरी चढ्यो होला भनेर । किनभने मैले शुरुमा त मलाई नै पत्याएको थिइन तर यो सब मेरो आँट र इच्छाले सम्भव बनाइदियो ।’
उनले भनेझैँ हिरोताकालाई हेरेर उनको यो सफलता पत्याउन आम मानिसलाई कठिन नै हुन्छ । हिमाल चढ्दाका अप्ठेराहरु समेटिएको उनको वृत्तचित्र हेर्दँ त झन आङ जिरिङ हुन्छ । उनले चरा उडेर पुग्ने ठाउँमा आफू हिँडेर पुगेको साहसिक कथा सुनाएका थिए ।
नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगोसमेत आश्चर्य भावमा हिरोेताकाका कुरा सुनिरहेका थिए । बेलाबेलामा जिब्रो काड्थे र अघिललो सिटमा बसेका उनी कुनैबेलापछि फर्किएर अरुको मुहार हेर्थे ।
विश्वमा ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ वटा हिमाल छन् । तीमध्ये विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित कञ्चनजंगा, लोहोत्से, मकालु, चोयू, धौलागिरी, मनास्लु, अन्नपूर्ण नेपालमै पर्छन् ।
‘आरोहण गर्दै थिएँ, मैले ‘च्यालेन्ज’ नै गरेर त्यहाँ पुगेको थिएँ, किनकी मलाई हिमालले मोहनी लगाएको थियो । एक्कासी हिमपहिरो आयो, मलाई त्यो पहिरोले ३०० मिटर तल बगायो ।’ उनले आफ्नो आरोहणको कथा सुनाए ।
उनी अगाडि भन्दै गए, ‘मेरो ढाडको हड्डी भाँच्चिएको थियो, शरीर पूरै हिउँजस्तै चिसो, कता दुखेको थियो थाहै थिएन । म बोल्न सक्दैनथेँ तर आरोहण दलका साथी भने चिन्थेँ । यो गासेरब्रुम चढ्दाको पीडाको कथा हो ।’
एउटा क्याम्पमा थिएँ, वरिपरि प्लाष्टिकले बेरेर राखेको सामानजस्तो थुप्रो थियो । मैले भने अक्सिजन मास्क लगाएको थिएँ, मेरो सहयोगीले नै त्यो लगाइदिएका रहेछन्, पछि थाहा पाएँ तर, मलाई अक्सिजन लगाइदिने साथिपछि बितीसकेको थियो । यसो हेरेँ प्लाष्टिकले बेरेर राखेको सामानजस्तो लाग्ने थुप्रो देखियो त्यो आरोहीको रहेछ, तर सबैले हिमालमै जीवन सुम्पिसकेका- उनले भने ।
हिरोताका भन्दै गए, ‘केही पहिले त सँगै थियौँ, र एकापसमा भन्थ्यौँ कि हिमाल चढेर आफ्नो र देशको नाम राख्नुपर्छ । उनीहरुको भौतिक शरीर हेर्दा पनि त्यतिमात्र सम्झिएँ । अनि मेरो कानमा गुन्जियो- हितोताका तँ अझै हिमाल चढ र नाम लेखा है । वास्तवमा आजका दिनसम्म पनि उनलाई हिमाल चढ्न प्रेरित गर्ने घटना त्यही हो । त्यो घटना सन् २००७ को हो ।’
मलाई त हिमालसँग जोरी खोज्नु मेरो रहरजस्तै भइसकेको छ, किन भने मेरो साथ टुटेका आरोहीहरुले हिमालसँग नहारेस् है भनेका छन् । मेरो एक जर्मनी साथी राल्फ साइमन र मैले संसारका ८ हजार मिटरमाथिका १४ वटै हिमाल चढ्ने अठोट गरेका थियौँ । त्यो क्रम मेरो बालककालदेखि नै शुरु भएर सन् २०१२ मा पूरा भएको हो । किन हिमाल चढ्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनको उत्तर थियो ।
उनको यो कीर्तिमान सन् २०१२ मा पूरा भएको हो ।
उनलाई उनका पिताले बाल्यकालमा नै जापानका पहाड चढाउन लानु हुन्थ्यो, त्यही बेलादेखि नै हिमाल हेर्ने रहर उनको मनमा भरिएर आउँथ्यो । उपस्थित जिज्ञासु मुहारको उत्सुकता मेटाउन उनले भने, ‘जापानमा आन्तरिक उडानमा उड्ने जहाज ८ हजार मिटरको हाराहारीमा उड्छन् । जहाजमा रहेका बेला हामी ८ हजार मिटर उचाइमा पुगेका छौं भनेर सूचना देख्नुभयो भने यसो जहाजबाट बाहिर हेर्नुहोला, तपाईंहरुलाई पनि म यति उचाइमा छु भन्ने भावना आउँछ ।’
तपाईं आफ्नो मिसनको चुचुरोमै पुगेपछि के देख्नुहुन्छ ? हाम्रो यो काल्पनिक प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘त्यो हिमालको शिखरमा पुगेपछि मैले अरु केही देख्दिन, मैले चढ्नुपर्ने त्यसपछिको अर्को हिमालको टुप्पो मात्र देख्छु र त्यसैबाट लोभिन्छु । अनि ओर्लिएपछि त्यसतर्फको यात्राको तयारीमा लाग्छु ।’
सन् १९७१ मा जन्मिएका हिरोताकाजस्तै ८ हजार मिटर अग्ला सबै हिमाल चढ्ने मानिस विश्वमा निकै थोरै छन् । ४८ वर्षीय उनको जाँगर अहिले पनि उस्तै छ । भन्छन्, ‘मेरो अबको लक्ष्य पनि हिमाल नै चढ्ने हो, कसैले नचढेका हिमाल चढेर नयाँ नयाँ गन्तव्य भेटाउने तर, अब हिमाल चढ्न गाह्रो हँुदै गएको उनको अनुभव छ । यो उनको उमेरले मात्र नभएर जलवायु परिवर्तन पनि एक कारण हो ।’
विगतमा आफूले चढेका हिमालका शिखरहरु हेर्दा काला हुँदै गएको देखिन्छ । हिउँ पग्लिएर पत्थर देखिन थालेको छ, यस्तोमा चढ्न झनै गाह्रो हुन्छ । सन् १९९६ मा २५ वर्षको उमेरमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढेपछि हिमाल आरोहणलाई निरन्तरता दिएका उनले बताए ।
नेपालले पनि सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ । हिमाल मात्रै नभई नेपालका अन्य प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको समेत प्रचार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । जापानी नागरिकले सगरमाथा आरोहरणको ५० वर्ष पुगेको अवसरमा सन् २०२० मा नेपाल र जापानमा समेत संयुक्तरुपमा कार्यक्रम आयोजना गर्ने समेत उनले जनाए ।
त्यो कार्यक्रममा खास के हुन्छ ? उनले भने, ‘त्यस कार्यक्रममार्फत् हामी विशेष गरी हिमाल र हिमाल आरोहणसम्बन्धी सूचना र सन्देश विश्वमा नै दिन चाहन्छौँ ।’
उनको अनुभवमा हिमाल चढ्ने काम एक प्रकारको कुशल अभ्यास पनि हो । यो एउटा ठूलो जोखिमको काम हो । जोखिम नलिँदासम्म सफलता पाउन पनि मुस्किल छ ।
यसोभन्दा उनमा थोरैमात्र डर र धेरै उत्साह देखिन्थ्यो । आफूलाई व्यावसायिक हिमाल आरोही बताउने उनले आफ्नो जीवनभर नै हिमाल चढ्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘जीवन रहेसम्म हिमाल चढ्छु, अबको योजना कोही नपुगेको शिखरमा पुग्ने छ । खोज्दैछु, अब कोही नपुगेको हिमाल चढ्ने हो ।’
लकडाउनको कारण भारतमा ८ लाख लिटर बियर खराब हुने